आउ साथी, खेलौं होली – Sajha Bisaunee
आउ साथी, खेलौं होली
होली नेपालीहरूले मनाउने एक प्रमुख चाड पनि हो । हिन्दु संस्कृतिमा होली पूर्णिमाको दिन मनाइन्छ अर्थात् प्रत्येक वर्षको फागुनशुक्ल पूर्णिमामा होली पर्व पर्ने गर्दछ । नेपाल, भारत तथा अन्य राष्ट्रमा रहेका हिन्दुहरूको एउटा महŒवपूर्ण चाड हो । यो चाड बसन्त ऋतुमा फागुनको महिनामा मनाइन्छ । होली रंगहरूको चाड हो । यस दिनमा मानिसहरू विभिन्न रंगहरू छ्यापेर एक अर्कोलाई रंगिन बनाउने गर्दछन् । होली पर्वको एक आफ्नै इतिहास छ, एक अफ्नै महŒव छ ।
मानिसहरू रंग किन मन पराउँछन्, किन रंगीन जीवनलाई अंगाल्न चाहन्छन् । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । रंगहरूले पनि त मानिसहरूको अवस्थितिलाई जनाउँछ । रातो रंगको एउटा अर्थ लाग्छ, सेतो ंरगको अर्को, पहेंलो, निलो, कालो सब रंगहरूको आ–आफ्नै अर्थ बोकेका हुन्छन् । रंग एउटा मात्रै एक्लै पनि त राम्रो देखिदैन । धेरै रंगहरूको मिश्रण अझ रौनक देखिन्छ । मानिसहरूका ओठमा हाँसो अनि हातमा रंगहरू बोकी सडकमा निस्कदाको हुल पक्कै मोहक हुन्छ । आ–आफ्ना मनभित्रका नकारात्मक सोचलाई हटाइ सबैसँग खुशी बाँढ्नुको मोह यस पर्वले बोकेको छ ।
रंग प्रेमको प्रतिक हो, सद्भावको प्रतिक हो, खुशीको प्रतिक हो । बुबा–आमाका ओठमा मुस्कुराहट नहोस् त कुनै पनि रंग फिक्का हुन्छ । साथी विनाको रंग सार्थकताविहिन हुन्छ । जसले रंगलाई प्रेमसँग तुलना नै गर्न नजानोस् त रंग कहिले रंगीन हुनै सक्दैन । रंग मनपर्छ भनुँ या पर्दैन भनुँ । अलि विरोधाभाष हुन्छ । रंगीन जीवन कसलाई मन पर्दैन र ? धेरै पहिले एउटा स्टाटस लेखेथें, ‘रंगविहीन जिन्दगीमा सोध्दै छौं, कुन रंग ल्याइदिऊँ’ लेख्नु सम्मन हो के लेखँे के । रिप्लाई अझै आएन । हामी पनि सानो सानोमा मेडिकलमा सुई लगाइ फालेका खोस्टामा घोलिएको रंग हालेर एक अर्कालाई छ्याप्ने गथ्र्यौं । हाम्रा मनस्थितिमा के–के हुन्थे होलान् । हामीमा खुशीयाली थिए, रिसिईबी थिएन । कहिले काहीं नराम्रो खबरहरू पनि सुन्ने गरिन्छ । होली खेल्दा कोही केही भए कोही केही भए ।
पर्वहरूमा नकारात्मकता सिर्जना पक्कै पनि अनैतिक कार्य हो । हामी रंगहरू सँग खुशी बाढ्छौं, एक अर्काका साथहरू बाढौं । सद्भावहरू बाढौं, यादहरू बाढौं ।
कसैले भनिदेवस् न मलाई रंग मन पर्न थाल्यो । तिम्रो स्पर्सले निधारमा लगइएको रातो रंग अझैं उस्तै छ । मेट्नै मनछैन । यस्तै ऐनामा हेरिरहुँ… यो पनि होली नै त हो । प्रेमको होली । घरका दाइ–भाइ, दिदीवहिनी एकै ठाउँमा बसी रंगहरूको माहोल बनाउँदा कस्तो हुँदो हो ? सिता, गिता, रिता, सरिता सबै सडकमा निस्किदिए कति रमाइलो हुँदो हो ?
अस्ती छिमेकीका दुई दाइभाइ अंशवण्डा गर्दै झडपमा मिसिएथे, आज रंग लिइ आगनी आइदिए कस्तो हुँदो हो ? मनमुटाव, नैराश्यता, नकारात्मकताले हामीलाई कु–बाटोतिर डो¥याउँदछ, रगतको होली खेलाउँदछ । छिमेक–छिमेकबीचमा द्वन्द्व ल्याउँदछ, साथी–साथीबीचमा रिस ल्याउँदछ ।
अब छोडिदेऊ न मित्र हामी पनि मनमुटावलाई भुलाइ रंगको होली खेलौं, आगनीमा उभिइ एक पटक किन
नहाँस्ने ? किन हाँसोहरूलाई सबैमा नबाड्ने । आऊ साथी होली खेलौं । हामी पनि मिलिजुली खेलौं ।
सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सकारात्मक भावना, सकारात्मक सोचले जडा गाडोस् । एकअर्कोमा लगाइएको रंग जस्तै रंगिन सोच अनि रंगिन जिन्दगी बनोस र मित्र तिम्रो ओठमा हाँसो उस्तै रहिरहोस् । ह्याप्पी होली ।
प्रकाशित मितिः २९ फाल्गुन २०७३, आईतवार १५:५३